Kwete Full Pipe & Vhura Channel
Iyi nhevedzano flowmeter inogona kuyera ese machani uye kwete yakazara mapaipi, hapana yakajairwa flume kana waya inodiwa.Iyo ultrasonic kuyerera mita Sensor inoshandiswa kuyera kumhanya kwemvura, kudzika, uye conductivity yemvura inoyerera munzizi, hova, nzira dzakavhurika uye pombi.Kana ikashandiswa neanofambidzana naye Lanry karukureta, chiyero chekuyerera uye kuyerera kwese kunogonawo kuverengerwa.
Iyi nhevedzano yekuyerera mita inoshanda pane yekufambisa-nguva nzira.Iyo clamp-on ultrasonic sensors inoiswa pamusoro pekunze kwepombi kune isiri-invasive kuyerera kuyerwa kwemvura.Mhando yekupinza ndeye kupisa-tapped mounting.Iyi inoshanduka uye iri nyore kushandisa flowmeter ndiyo yakanakira sevhisi sevhisi uye mabasa ekugadzirisa.
Doppler Ultrasonic Flow Meter yakagadzirirwa kuyera kuyerera kwevhoriyamu yemvura mukati memugero wakavharwa, mutsara wepombi unofanirwa kunge uzere nemvura, uye panofanira kunge paine humwe huwandu hwemhepo inoputika kana yakamiswa yakasimba mumvura.Inoshandiswa zvakanyanya mutsvina yakasvibirira, mvura yepasi, makemikari uye mapepa slurries kuyerera kuyerwa.
Lanry inyanzvi yekugadzira mvura inoyerera metres inobatanidza R&D, kugadzira, kushambadzira uye sevhisi.Yakabatanidzwa mukugadzirwa kwechiridzwa chekuyerera kweanopfuura makore makumi maviri, iine advanced chigadzirwa dhizaini uye hupfumi munda application ruzivo, yakazvipira kusimudzira uye hunyanzvi hwepamusoro-yekupedzisira system mhinduro.Isu hatingope zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, asiwo tinopa vatengi seti yakakwana yemhinduro zvichienderana nezvinodiwa nevatengi uye pa-saiti mamiriro ekushandisa, akasanganiswa neruzivo rwehunyanzvi uye ruzivo rwakapfuma pasaiti.
Mvura & Yakarasika Mvura
Yakajairika mashandisirwo e ultrasonic kuyerera mita anonyanya kuyera mvura inopisa, mvura inotonhorera, inotakurika mvura, mvura yegungwa, rwizi mvura, ect.Shandisa iyo yekufamba-nguva musimboti, Doppler musimboti kuyera kuyerera, nharaunda velocity, kudzika.
Hydrology Uye Kuchengetedza Mvura
Flowmeter inoshandiswa kuyera kumhanya kwemvura, kudzika uye kupisa kwemvura inoyerera munzizi, hova, migero yakashama nemapombi.Kana yakashandiswa neanofambidzana karukureta, chiyero chekuyerera uye kuyerera kwese kunogonawo kuverengerwa.
Chikafu, chinwiwa uye mishonga zvinowanzoda hutsanana flowmeters.Asi kuti kuve ne zero kudonha kudonha, hapana njodzi yekuvuza, uye kuiswa pasina chero kudzima, clamp-on transit-nguva ultrasonic kuyerera mita chigadzirwa chakanakira.
Mamiriro ekushanda muPetroleum & makemikari masaiti ari kudiwa zvakanyanya, mamwe acho ari kupfuta, ane chepfu, kana kukanganisa zvakanyanya.Uyezve, tembiricha yakanyanyisa inogona kusangana.Pasi pemamiriro ezvinhu aya, clamp-on ultrasonic flow metre haisi-inopindirana inoyerera, mukana unonyanya kuoneka.
Kuvaka Kushanda Kwesimba
Kuvaka Simba Nesimba rinoshandiswa zvakanyanya pakuona kuti HVAC System inoshanda nemazvo.Yakagadziriswa clamp-pane ultrasonic kuyerera mita, ultrasonic mvura mita uye BTU mita inowanzoshandiswa pairi.Kuisa iyo chaiyo yekuyerera mita, inobatsira kudzikisa chivakwa chako simba rekushandisa.
Iyo yakasarudzika nzira ndeye clamp-pane ultrasonic kuyerera mita kuyera iyo inopinza mvura inoyerera kune iyo boiler, kupisa simba boiler feed mvura.Zvakanakira tekinoroji iyi ndezvekuti haina-invasive isina pombi yekucheka.
Vhura nzira inoyerera
Doppler ultrasonic kuyerera
Transit-nguva ultrasonic kuyerera
New Product Launch-Dual-channel Ultrasoni...
Mumakore achangopfuura, nekufambira mberi kwetekinoroji, iyo yekuyerera mita inovandudzwa zvakare, ese marudzi ekuyerera mita akafara ...
2022 Kisimusi yakanaka